နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်တွေကို အိမ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ? – SUNNY Tech News
SUNNY Tech News
နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်တွေကို အိမ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ?
Posted byThet Su Lwin 22nd Dec 2020 Posted inUncategorized
ဆောင်းရာသီရဲ့အအေးပိုကဲတဲ့ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ မကြာခင်မှာနှစ်‌ဟောင်းကုန်ပြီး နှစ်သစ်ကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ အရင်နှစ်တွေကလိုမျိုး New Year Plan တွေလုပ်ဖို့အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား? နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်မှာ အိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့နေပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်လို့ရမယ့် activities လေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေး chill လို့ရမယ့် idea တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) နယ်မြေရပ်ခြားအဝေးကိုရောက်နေတဲ့ ချစ်ရသူတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ Group Video call ပြောလို့ရပါတယ်။ နှစ်သစ်မကူးခင်မှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ချင်းစီဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ Count Down လုပ်ကြရင်း နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ပျော်စရာညတစ်ညကို ကုန်ဆုံးလို့ရပါတယ်။
(၂) အိမ်မှာပဲ အရင်းနှီးဆုံးဘော်ဒါတွေနဲ့ New Year Dinner ကိုသေချာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီး သီချင်းတွေအပီအပြင်ဖွင့်ရင်း သောက်ကြစားကြနဲ့ နှစ်သစ်ကူးညမှာ House party ဆင်နွှဲလို့ရပါသေးတယ်။
(၃) တစ်ယောက်ထဲသမားဆိုရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့။ New Year Movie Collection တွေကိုရှာဖွေပြီး တစ်ညလုံးရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာ၊ Game ဆော့တာ၊ Coffee တစ်ခွက်ဘေးချပြီး စာအုပ်ဖတ်တာတွေ လုပ်ရင်း ၂၀၂၁ ကို အေးအေးလူလူကြိုဆိုလို့ရတာပါပဲ။
(၄) ခြံဝန်းကျယ်တယ်ဆိုရင်တော့ မြက်ခင်းပေါ်မှာ Tent လေးထိုး၊ မီးပုံပွဲလေးလုပ်ပြီး ကြယ်တွေကိုကြည့်ရင်း နှစ်သစ်ကူးညကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းလို့ရပါတယ်။
(၅) မိသားစုဝင်များများစားစားရှိတဲ့သူတွေကတော့ ညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ Minute to win it လိုမျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့ gameတွေ၊ Monopoly, UNO တို့လို Game တွေကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကြည့်ပါ။
အခုလိုမျိုး activitiesတွေနဲ့ နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်တွေကို အိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သည်းခံဖြတ်သန်းကြပြီး လာမယ့်နှစ်သစ် (2021) မှာလည်း စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့အောင်မြင်မှုအသစ်တွေ ရရှိကြပါစေ။ ကိုဗစ်ရောဂါအန္တရာယ်ကင်းဝေးပြီး ဒီကပ်ရောဂါကြီးလည်း အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေ လို့ အားလုံးအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။
2021 New Year ကို အိမ်မှာပျော်ပျော်ကြီးနွှဲဖို့ အတန်တကာ့အတန်ဆုံးစျေးနဲ့ရတုန်း ဝယ်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း(၄)မျိုး
၂၀၂၀တစ်နှစ်လုံးမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာရေစီးကြောင်း(၅)မျိုး
SUNNY Tech News, Blog at WordPress.com.